J/Dhexe: Duqeymo Xooggan oo lagu beegsadey saraakiil Al shabaab ah. | SMC
Home WARARKA MAANTA J/Dhexe: Duqeymo Xooggan oo lagu beegsadey saraakiil Al shabaab ah.
Duqeynta Hore ayaa lala beegsadey Xaruun Tababar ciidan oo udhow degmada Salagle oo tababar ugu socodey kudhawaad 240 askari oo alshabab katirsan.
wararka ayaa intaa ku darayaa in xaruunta xilaga laduqeynayey ciidanka udiyaar garoobayeen qeybo kamid ah casharada lasiiyo.
dhinaca kale Dukhaymo diyaaradeed ayaa kadhacdey Degmada Bu”aale ilo wareydyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in seddex duqeymo ka kala dhaceen Gudaha iyo duleedka degmada Bu”aale.
-Xarun ciidamo Amni ah Alshabaab dooneysey in Gobolka Banaadir lagu weeraro 17ka bisha Ramadaan sida ay xaqiijinayaa saarkiil katirsan sirdoonka soomaaliya.
-Xarunta 2aad ayaa eheed xaruun ay kusugnaayeen Dagaal yahano Loogu talagalay in lagu weeraro Degmada Baardheere, xaruuntaas oo kutaala meel 5 km ujirta degmada Bu”aale, ciidankaas oo lagu wadey in maalinta beri u dhaqaaqaan dhanka Gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Baardheere, waxaana gebi ahaamba laburburiyey saanadii ay wateen waxaana duqeynta kudhintey abaanduulihii ciidanka watey oo magaciisa lagu soo koobey Abu Fatima.
-duqeynta 3aad ayaa larumeysan yahay in lagu diley sargaal sare oo Amniga Al shabaab katirsan kaas oo lagu magacaabo Xusen wuxuuna xilagaa kaxeynayey Gaari waxaana lagu diley duleedka magaalada xili uu sar dhulka ah kujirey
howl galka waxaa iska kaashanayey sirdoonka soomaaliya iyo saxiibada soomaaliya.
lama oga tirada rasmiga ah ee ku waxyeelowdey Duqeymahan.
wixii kusoo kordha dib ayaan idin kaga soo gudbin doonaa.
Previous articleBeesha Caalamka oo War kasoo saartay heshiiskii Madaxweynaha Jubbaland iyo Mucaaradka
Next articleDhageyso Maamulka Cisbitaalka Bayhaaw Oo Sheegay in Qeyb weyn Ka qaataan Bixinta Adeeg Caafimaad Bilaasha ah.